नयाँ दैनिक | एसएसपी लामाका गार्ड किन परे निलम्वनमा ? एसएसपी लामाका गार्ड किन परे निलम्वनमा ? – नयाँ दैनिक
माघ १९, काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले दैनिकरुपमै मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी साधन चलाएको छ कि छैन चेकिङ गर्दछ । मापसे गरेर सवारी साधन चलाउनेहरु दैनिक सयौँको संख्यामा कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । तर, कतिपय प्रहरीलाई चेकिङ गर्दा आफैँले मापसे गरेर बस्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गरेर तीब्र गतिमा मोटरसाइकल चलाएको आरोपमा त्यस्तै दुई जना प्रहरी निलम्बनमा परेका छन् ।
निलम्बित हुनेमा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा कार्यरत जवान मिलन ढुंगाना र महानगरीय प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारमा कार्यरत मनोज धमला छन् । ढुंगाना काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी वसन्त लामाको गाडी पछाडि बस्ने सुरक्षागार्ड हुन् । बिहीबार साँझ अनियन्त्रित रुपमा मोटरसाइकल चलाइरहेको भन्दै भक्तपुर प्रहरी परिसरमा खबर भएको थियो । लगत्तै, चेकजाँचका क्रममा मनहरा खोलानजिक उनीहरु समातिएका थिए ।
तर, त्यहाँ उनीहरुले डियूटीमा रहेका सईसँग पनि अपशब्द बोलेका थिए । त्यसपछि सोधपुछका क्रममा उनीहरु प्रहरी भएको खुलेको थियो । दुवै जनालाई अहिले भक्तपुर प्रहरी परिसरमा राखिएको छ । उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरेर के कारबाही गर्ने भन्ने निर्क्यौल हुने काठमाडौं प्रहरी प्रमुख लामाले बताएका छन् ।